Jiri obi ụtọ nabata Xie Yu'an, osote onye isi oche nke Henan CPPCC ka ọ gaa na ụlọ ọrụ anyị maka nyocha na nduzi
N'isi ututu nke October 20, Xie Yu'an, onye isi oche nke Henan Provincial Kọmitii nke Nzukọ Ndị Isi Ọchịchị nke Ndị China, Zhu Dongya, Onye isi oche nke Nnọkọ Mgbasa Ọchịchị Ndị Isi Obodo nke Shangqiu, Onye Isi Oche nke Kọmitii Party Party Yucheng County, na Wu Dongmei, Onye isi oche nke Mgbakọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke County, dugara ụfọdụ ndị otu CPPCC ka ha nyochaa ma duzie ọrụ anyị. Mazị Yang Qian, Onye isi Zhurun ​​Group, na Mr. Qiao Hongtao, onye isi njikwa ụlọ ọrụ ahụ, sooro ya ma gosipụta ekele ndị sitere n'aka ndị isi maka ọbịbịa na nlekọta ha.
Onye isi otu ahụ, Yang Qian so ndị otu nyocha a wee nyochaa ụlọ ọrụ ebe a na-eme ebe a na-eme ihe nkiri, na-emejuputa ihe omumu na ebe a na-egosipụta ụlọ ọrụ ihe eji emepụta biya na ngwa agha. Ọ kọkwara n'ụzọ zuru ezu na mmepe azụmaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ, mgbanwe omumu ihe omumu ihe omumu, nyocha ohuru na mmepe, yana atụmatụ mmepe otu a.
Na usoro a, Onye isi oche Xie, osote onye isi oche nke Kọmitii Kọmitii Ọchịchị nke ndị China, gere akụkọ Maazi Yang n'ụzọ zuru ezu ma jụọ ajụjụ banyere ọnọdụ ndị dị ugbu a na ngwaahịa anyị (akọrọ mix ngwa agha, ngwa biya biya, ngwa ọrụ biya, ọgụgụ isi igwe ejibeghi ihe n ’ụgbọ ala). Onye isi oche Xie kwadoro atụmatụ amamihe anyị na atụmatụ mmepe ya, ma kwanyeere ụlọ ọrụ anyị ugwu dị ka naanị ụlọ ọrụ na-ekere òkè na ọkwa mba nke ngwa agha akọrọ agwakọta. Ndị otu nyocha ahụ kwupụtara nkwuputa ha banyere akụrụngwa mmepụta anyị dị elu, otu egwuregwu R&D na akụrụngwa na-eji igwe mma.
N’ikpeazụ, Onye isi Yang gosipụtara ekele ya nye Onye isi Xie maka nchegbu ya na nkwado ya maka ụlọ ọrụ anyị. Companylọ ọrụ anyị ga na-arụ ọrụ siri ike ma ka mma, baara ọha na eze uru na obere ọgụgụ isi mmadụ mara mma, ma na-agba mbọ ịghọta "Nrọ China"
Oge nzipu ozi: Apr-21-2020